Ry mpiara-miasa sy mpamatsy orinasa malala, tato ho ato dia hita fa misy orinasa sy olona mampiasa tsy ara-dalàna ny anarana sy ny adiresin'ny orinasanay (Shijiazhuang Mets Machines co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177 ) sy orinasa hafa ao ...Hamaky bebe kokoa »
Miarahaba ireo mpiara-miasa amin'ny sampana teknika tamin'ny fahazoana ny dite teknika
Fanomezana ekipa Miarahaba ireo mpiara-miasa amin'ny sampana teknika tamin'ny fahazoana ny loka ekipa teknika, departemanta hafa no hanaraka ny ohatra nomeny. Hamaky bebe kokoa »
Ho avy ny lohataona, fotoana fialamboly!
Ho avy ny lohataona, fotoana fialamboly! Ny mpiara-miombon'antoka rehetra amin'ny orinasa dia nivory teo amin'ny sampanan-dalana jianhua sy ny lalana avaratra faharoa. Ny zotram-bisikiletanay dia ny fanangonana fiolahana ary avy hatrany dia nihodina ny Hutuo River-Zhengding South Gate-Retrace ary nanana bisikileta ny dianay. Niresaka tamin'ny e ...Hamaky bebe kokoa »
Famokarana tontolo iainana
Ny orinasanay dia mifikitra amin'ny foto-kevitry ny fisakaizana amin'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny harena. Vao haingana ny toe-draharaha fiarovana ny tontolo iainana dia marefo, mamaly tsara ny orinasanay ary manatanteraka ny famokarana fiarovana ny tontolo iainana. 1. Esory ireo fotodrafitrasa efa lany andro ary ampahafantaro ny mandroso ...Hamaky bebe kokoa »
Mankalazà am-pahatsorana ny fanamarinana indroa an'ny orinasantsika.
Hebei Hanchang Minerals Co., Ltd. dia nandalo fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001, mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa aman-draharaha OHSAS18001 tamin'ny 1 septambra 2017. Manondro izany fa nahatratra ny fenitra iraisam-pirenena ny orinasanay amin'ny fampidirana ireo managem isan-karazany ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana paompy slurry?
Rehefa mikarakara slurries ianao dia matetika ny mpampiasa no tsy maintsy misafidy ny fananganana milina vita amin'ny kofehy na vy ho an'ny paompin-drongony. Ny tabilao 1 amin'ny faran'ity lahatsoratra ity prov ...Hamaky bebe kokoa »
Ireo singa amin'ny paompy slurry
Impeller Ny impeller, na elastomer na chrome avo, no singa mihodina indrindra izay manana vanes hampitana ny hery afovoany amin'ny ranoka. Casing Split ivelany casing halves ny mpilalao dia misy ny akanjo fiarovan-tratra ary manome fahaiza-manao tsindry ambony. Ny casing sha ...Hamaky bebe kokoa »
Tongasoa ireo mpanjifa vahiny hitsidika ny orinasanay! Hamaky bebe kokoa »
Fampandrosoana sy famerenana ny indostrian'ny paompy
1.1 ny indostrian'ny paompy dia efa hatramin'ny ela ny paompy no masinina taloha. Firenena eropeana orinasa mpamokatra paompy voalohany naorina teo afovoan'ny taonjato faha-20, mihoatra ny 10 toa ny orinasa Etazonia Wortington Etazonia naorina tamin'ny 1980, Ingersoll Rand-ny orinasa naorina tamin'ny 1860, Byron-Jackson comp ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fiasan'ny paompy slurry centrifugal?
Toy ny ankamaroan'ny paompy, ny paompy centrifugal dia manova ny angovo mekanika avy amin'ny motera ho lasa angovo misy tsiranoka mihetsika; ny sasany amin'ny angovo dia miditra amin'ny angovo kinetika ataon'ny tsiranoka, ary ny sasany mankany amin'ny angovo mety, aseho amin'ny tsindry tsiranoka na amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny tsiranoka amin'ny hery misintona amin'ny avo kokoa. Ho an'ny bebe kokoa ...Hamaky bebe kokoa »